Thomas Tuchel Oo Sharraxay Sababtii Uu Abraham Oo Caafimaad Qaba Uga Reebay Liiska Ciyaartoydiisa Kulankii West Brom - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaThomas Tuchel Oo Sharraxay Sababtii Uu Abraham Oo Caafimaad Qaba Uga Reebay Liiska Ciyaartoydiisa Kulankii West Brom
Thomas Tuchel Oo Sharraxay Sababtii Uu Abraham Oo Caafimaad Qaba Uga Reebay Liiska Ciyaartoydiisa Kulankii West Brom
Tababare Thomas Tuchel ayaa sharraxaad ka bixiyey sababtii uu liiska ciyaartoyda kooxdiisa ee kulankii guul-darrada xanuunka badan kasoo gaadhay ee shalay ay West Brom ku garaacday 5-2.
Tababaraha reer Germany ayaa laga jabiyey rikoodhkii guul-darro la’aanta ee 14ka ciyaarood soo socday, waxaana dhinac walba kaga timid oo burburisay West Brom oo ka dagaallamaysa in ay dib ugu noqoto heerka labaad, taas oo keentay in Thiago Silva uu qaybta hore oo kala-badh waxyar dhaaftay uu kaadh cas ku baxo.
Kulankan waxa ka maqnaa weeraryahanka reer England ee Tammy Abraham oo caafimaad qaba, isla markaana aan wax dhaawac ah qabin, sababtuna waxay ahayd in uu tababaruhu ka saaray liiska ciyaartoydiisa ee kulankii Sabtidii.
Thomas Tuchel oo sharraxay sababta ayaa sheegay in loo ogol yahay 18 ciyaartoy in uu usoo xusho kulan kasta, sidaas darteedna uu qaatay go’aan ah in Abraham aanu qayb ka noqon safka Blues ee ciyaartii shalay.
Isagoo la hadlayay warbaahinta kaddib kulankii shalay, waxa uu Thomas Tuchel yidhi: “Tammy kooxda kama mid ahayn. Waxaan soo magacaabay 18 ciyaartoy.
“Waxa jira go’aamo adag oo ay tahay in la sameeyo. Waxa aanu qaadanay dookh ku salaysan dalabaadka kulanka, wixii aanu saadaalinay iyo beddellada aanu samaynayno.
“Ma jirin arrin shaqsi iyo wax ka weyn toona. Fursad uu ku ciyaaro ayuu heli doonaa saddex maalmood oo kasta si la mid ah qof kasta oo kale.”
Tammy Abraham ayaa kusoo bilowday saddex ciyaarood oo kaliya oo Premier League ah tan iyo intii uu Thomas Tuchel beddelay Frank Lampard bishii January.
23 jirkan oo ah ciyaartoyga ugu gool-dhalinta badan Chelsea xilli ciyaareedkan ayay qandaraaskiisa ka hadhsan yihiin laba sannadood oo kaliya, walina ma saxeexin heshiis uu kusii joogayo Stamford Bridge.
Waxaad mooda in chalsea ay iska indho tirays dhayman an lacag lagasiin halkay uhantaagayaan haland